'Waxaan dib u billaabeynaa xulka gabdhaha kolayga Soomaaliya' - BBC News Somali
'Waxaan dib u billaabeynaa xulka gabdhaha kolayga Soomaaliya'
Lahaanshaha sawirka Xiriirka Olimbikada Soomaaliyeed
Image caption Sucaad Cabdullaahi
Waxa ay ka mid ahayd xiddigihii kubbadda kolayga ee gabdhaha Soomaaliyeed muddo 30 sano ka hor ah, balse markii uu dowladdii dhexe burburtay ayay u qaxday dalka dibeddiisa, halkaas oo ay ku qaadatay nolosheeda inta badan.
Hase yeeshee marnaba ma aysan hilmaamin dalkeedii hooyo, waxayna aad u xusuusataa barisamaadkii markii kooxaha ciyaaraha Soomaaliya matalaya ay fagaaraasha adduunka luli jireen calanka buluugga ah.
Kooxda kubbadda gabdhaha ee kolayga waxaa la asaasay sanadihii 1970-naadkii, xiligaas oo uu baal goray u surnaa ciyaartooyda Soomaalida, balse ciyaarihii ugu dambeeyay waxa ay safreen sanadkii 1987-dii.
Ciyaaraha K/Kolayga Gabdhaha oo ka furmay Garowe
Xidhiidhka aduunka ee kubadda kolayga oo ogolaaday in habluhu khimaar ku ciyaari karaan
Kulamadii maanta ee tartanka kubadda Koleyga gabdhaha Soomaaliya
Laacibka Soomaaliyeed ee Kolayga oo ciyaaraha ka fadhiistay
Si la mid ah dad badan oo Soomaaliyeed oo inta dalka dib ugu soo laabtay, ka shaqaynaya sidii dib ugu soo kaban lahaa, ayay Sucaad Cabdullaahi dalka dib ugu soo laabatay.
Waxa ay diirada saaraysa arrin aysan dad badan danayn u haynin, hase yeeshee ah wax ay iyada aad u garanayso, taas oo ah soo noolaynta ciyaarihii gabdhaha ee kubbadda kolayga.
Kaliya ma doonayso in dib loo asaaso kooxihii gabdhaha, ee waxa kale oo ay doonaysaa in la abuuro xul qaran oo ciyaaraha adduunka ku matala Soomaaliya sida ay Sucaad u sheegtay Axmed Mursal Catoosh oo ka tirsan laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da "Maamul goboleed kasta waxaan u asaasaynaa koox gabdho kubbadda koleyga, sida Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle, iyo Puntland, sidaad la socotid markii aan ciyaarihii gobolada qabanay, waxaan ka dhex helnay koox xul qaran".
Waxa ay sheegtay in loo baahanyahay in haddii ay tahay in la helo xul qaran oo wanaagsan, in markaas gabdhaha da' aad u yar ay ku bilaabaan ciyaaraha "Waxaa loo baahanyahay in gabdhaha jecel ciyaaraha, in ay ka bilaabaan dugsiga hoose dhexe ciyaaraha, madaxdii aan kala hadalnayna waa ay soo dhaweeyeen".
Ma jirto ciyaar aan ka ahayn tan kolayga oo ay kasoo muuqdaan dumarka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ugu sii darsantahay cadaadiskii ay kala kulmeen kooxihii hubeysnaa ee meelo badan oo dalka ka mid ah ka talinayay, kuwaas oo ka mamnuucay dhaqdhaqaaqyo badan oo xoriyadeed.
Balse tan iyo intii dowladda ay ku faaftay qeybo ka mid ah gobolada dalka, waxaa la arkayaa dumar badan oo ku dhiiranaya ciyaaraha kolayga, taas oo ah waxa dhiirogaliyay Sucaad in ay dalka kusoo laabato.